Nceda ungaphenduli kwiSicelo seMidiya yoLuntu ngale ndlela | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 23, 2017 NgoLwesihlanu, Oktobha 27, 2017 Douglas Karr
Enye yezicelo zam endizithandayo zeselfowuni yile Zima. Iyandishiya kude nokugcwala kwabantu, iyandinceda ndiphephe iingozi, kwaye indilumkisa ngamapolisa angaphambili - endisindisa ekubalekeni amatikiti ukuba kunokwenzeka ukuba bendiphupha emini kwaye ndihamba ngaphezulu komda.
Bendisemotweni ngenye imini ndaye ndagqiba kwelokuba ndimise kwivenkile ye-cigar ndiyokuthathela umhlobo wam isipho, kodwa andiqinisekanga ukuba zeziphi ezikufutshane. Iziphumo azikhange zibonakalise mdla… kwivenkile ye-cigar engama-432 eemayile kude kudweliswe “ngeenxa zonke kum”. Ke, ndenze oko nawuphi na umthengi olungileyo anokuyenza. Ndithathe skrini kwaye ndabelana ngayo noWaze.
.@waze Ngaba ucinga ukuba kufuneka ndiqhube iikhilomitha ezingama-432 nge-cigar? Andiqondi ukuba “kufutshane nam”. pic.twitter.com/lLB8pukoQm
- Douglas Karr (@kwenze_k) Oktobha 20, 2017
Ngelishwa, le mpendulo ndiyifumene:
Oh hayi! Ungangenisa ingxelo yegciwane apha: https://t.co/FnxjYba2tF
Waze (@waze) Oktobha 20, 2017
Ndiphendule ngoko nangoko:
Ndixele nje apha.
Umsonto wema apho.
Andiqinisekanga ukuba zingaphi iinkampani ezenza oku, kodwa kufuneka ziyeke. Ukuba unikezela ngesango kwinkampani yakho ngeendaba zosasazo kubathengi bakho, kuya kufuneka ulindele ukuba baxele imicimbi ngaloo ndlela, kwaye kufuneka abantu banikwe amandla okuphendula.
1 kwabane abasebenzisi beendaba zosasazo ukhalaze ngeendaba zentlalo, kwaye ama-63% alindele uncedo
Sele ndithathe imizuzu embalwa emini ngenxa yokuba bendikhathalele umgangatho weapp, andizukuya kwelinye iphepha, ndigcwalise iqela lolwazi, ndilinde impendulo… bendifuna wazi iapp yakho yaphukile ukuze ukwazi ukuyilungisa.
Impendulo enkulu ibiya kuba Enkosi @douglaskarr, ndiwuxelile umba kwiqela lethu lophuhliso.
tags: Inkonzo eyenzelweinkonzo yabathengi isiceloImidiya yokuncokolainkonzo yabathengi kwimidiya yoluntukakhulu
Oktobha 23, 2017 ngo-7: 16 PM
Ndivuma ngokupheleleyo. Ndikwenzile oku amatyeli ambalwa, kwaye ndifumana impendulo yesiqhelo “ungayigcwalisa ingxelo yegciwane” okanye “ungasithumela i-imeyile ku-X” -ndaye nam ndiphendule njengokuba wenzile.